दस्तावेज – Page2– Banking Khabar
बैंकिङ खबर । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को नौ महिनाको तथ्याङ्कमा आधारित आर्थिक तथा वित्तीय स्थिती यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ : आर्थिक परिदृश्य १. केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले हालै सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन आधारभूत …
२८ वाणिज्य बैंक : कुनको मुनाफा कति ?
बैंकिङ खबर । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको खुद मुनाफा तेस्रो त्रैमासमा नै तीन अर्ब नाघेको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, नविल बैंक र नेपाल बैंकको नाफा दुई अर्बमाथि पुगेको छ । यसबाहेक ११ वटा बैंकको नाफा अर्बमाथि रहेको छ । …
राष्ट्र बैंकको ६३औँ वार्षिकोत्सव : असारभित्रै सबै स्थानीय तहमा बैंक पुर्याउने योजना
बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. नेपालले आगामी असार मसान्तभित्र नै सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक पुगिसक्ने बताएका छन् । राष्ट्र बैंकको ६३औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर डा. नेपालले हालसम्म संघीय संरचनाअनुसारका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ३९४ वटामा …
२०७४ सालका चर्चित बैंकिङ खबरहरु
सुष्मा थापा/बैंकिङ खबर । २०७४ सालमा बैंकिङ क्षेत्रले निरन्तर रुपमा तरलता समस्याको सामना गर्यो । प्रविधिको विकासका हिसाबले भने बैंकिङ क्षेत्र निकै उपलब्धीमूलक बन्यो । साथमा प्रविधिको दुरुपयोगका घटनाहरु पनि आए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसम्बन्धी कतिपय नीति नियमहरु परिमार्जित …
बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागले देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सार्वजनिक गरेको छ । विभागले चालू आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को आठ महिनाको तथ्याङ्कमा आधारित विवरण सार्वजनिक गरेको हो । उक्त विवरण जस्ताको तस्तै यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ …
सरकारद्धारा जारी श्वेतपत्र (पूर्णपाठ)
बैंकिङ खबर । सरकारले शुक्रबार मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थालाई समेटेर श्वेतपत्र जारी गरेको छ । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले संसदको बैठकमा श्वेतपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । श्वेतपत्रको पूर्णपाठका लागि तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् : http://www.mof.gov.np/uploads/document/file/White%20Paper%20-%20Final_20180330104139.pdf
बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागले देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिती सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को सात महिनाको तथ्याङ्कमा आधारित रहेर उक्त विवरण सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको …
बैंकिङ खबर । २८ वटै वाणिज्य बैंकले आफ्नो दोस्रो त्रैमासिक रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका छन् । जसअनुसार, नविल बैंकले सबैभन्दा धेरै नाफा कमाएको छ । दोस्रो त्रैमासमा नै नौ वटा बैंक अर्वपति क्लबमा प्रवेश गरेका छन् । हेरौँ, २८ वटै बैंकको …
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को पाँच महिनाको तथ्याङ्कमा आधारित आर्थिक तथा वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक परिदृश्य १. उपलब्ध तथ्याङ्कहरुले समग्र आर्थिक गतिविधि सही दिशामा नै रहेको देखाउँछ । उद्योगको क्षमता उपयोगमा भएको विस्तार, कच्चा …
आर्थिक परिदृश्य १. हालसम्म उपलब्ध आर्थिक तथ्याङ्कहरुबाट आर्थिक तथा वित्तीय परिदृष्य मिश्रित रहने देखिन्छ । २. तीनवटा सकारात्मक विकासक्रमले आगामी आर्थिक परिदृष्य निर्धारण गर्ने देखिन्छ । पहिलो, निर्माण कार्यले गति लिएको छ । व्यक्तिगत घर, होटल तथा जलविद्युत परियोजनाहरुको निर्माण …
आरपी पौडेल बैंकिङ खबर / ईतिहासका पाना पल्टाउँदै जाने हो भने समय अन्तरालमा मानिसले गरेको विनिमयहरु निकै रोचक पनि लाग्छन् । आजका दिनसम्म आईपुग्दा मानिसहरुले धेरै थरीका विनियमय गरेको भेट्न सकिन्छ । लामो समयको घुमन्ते र जंगली तथा झुण्डमा जीवन व्यतित …
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाको समीक्षा गरेको छ । पहिलो तीन महिनाको तथ्याङ्कमा आधारित रहेर गरिएको समीक्षामा राष्ट्र बैंक आर्थिक सुधारप्रति आशावादी देखिएको छ । राष्ट्र बैंकद्धारा सार्वजनिक गरिएको समीक्षा प्रतिवेदनको सारांश …
२८ वाणिज्य बैंक : कसको नाफा बढ्यो ? कसको घट्यो ?
रुपा कोइराला/बैंकिङ खबर । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा नेपाल बैंक लिमिटेडले सबैभन्दा धेरै मुनाफा आर्जन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा मुनाफामा गिरावट आएको भए तापनि अन्य बैंकहरुको तुलनामा भने नेपाल बैंकको नाफा सबैभन्दा बढी हो …